Xisbiga S oo taageero dheeraad ah helay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Isku shaandheeyntii golaha wasiirada. sawir: Erik Simander/TT
Xisbiga S oo taageero dheeraad ah helay
La daabacay torsdag 10 augusti 2017 kl 14.20
Baadhitaan taageerada codbixiyaasha oo ay wargeeyska Expressen u samaysay Demoskops ayaa lagu ogaaday in xisbiga Socialdemokraterna helay taageero dheeraad ah.
Xisbiga Socialdemaraterna ayaa taageeraddiisa codbixiyaasha korodhay 1.4 boqokiiba, tan oo taageerada guud ee codbixiyaasha Socialdemokraterna ka dhigtay 28,4 qobolkiiba.
Baadhitaankan ayaa la sameeyey todobaadkii hore ayaa, markii oo ay jirtay fadeexad gilgishay xukumada, kuna keliftay in isku shaandheeyn lagu sameeyo golaha wasiirada.
Sören Holmberg oo cilmiga maamulka ka dhiga jaamacada Göteborg ayaa aaminsan sida raysalwasaare Löfven uu u maareeyey fadeexadan ay qancisay codbixiyaashan.
- Labo wasiir ayaa iscasilay halka wasiirkii taageerada ugu badan ka haystey codbixiyaasha dhanka midig la reebay. Markan xisbiyada mucaaridka xalad cakiran ayaa la geliyey, taasna waa ay shaqeysay sida aan arkeeyno, ayuu yidhi Sören Holmberg.
Dhinaca kale xisbiga Sverigedemokraterna ayaa markii ugu horeysay dib u dhac weeyn oo taageerada codbixiyaasha ah la soo gudboonaatay. Baadhitaankan ayaa muujinaya in taageerada SD ay hoos uga dhacday 20.1 oo ay markii hore ahayd, iyada oo ay hada tahay 16,6 taas oo la macne ah in SD lumiyey 3,5 boqolkiiba taageerddisa codbixiyaasha. SD waxa uu hoos uga dhacay kaalinta labaad ee xisbiga ugu weeyn sida xisbi ee baarlamaanka Sweden ku jira.
- Iyagu qayb kama ahayn doodan, waxa iska horjeeday oo xiisaha dad-weeynaha soo jiidanayey xisbiyada Alliansen iyo Socialdemokrater. Mida labaad dooda arrimaha qaxootigu ma joogto heerkii ay gaadhsiisanayd markii SD ugu taageerada badnayd.Tirada qoxootiga aan qaabilnaa hoos ayey aad ugu dhacay, ayuu sheegay Sören Holmberg